Ikhala ngokungahlonishwa kwamaKhosi I-Democratic Alliance | News24
Ikhala ngokungahlonishwa kwamaKhosi I-Democratic Alliance
IQEMBU le-Democratic Alliance lizwakalise okukhulu ukushaqeka nokudumala ngelikubize ngokwehliswa usithunzi nokubukelwa phansi kuka sihlalo wobuKhosi namaKhosi aseMzumbe. Lokhu kubonakale emcimbini wokugubha usuku lwaloyo owayengu Mengameli wase Ningizimu Afrika neNkosi yesizwe saBathembu uDkt Nelson Mandela, ngesikhathi amaKhosi abehlaliswe noquqaba.
Lo mcimbi ubungo Lwesithathu mhla ka-18 kuNtulikazi (July) ezinkundleni zemidlalo KwaShibase esizweni seNkosi yakwaCele eMfangisale.
Usihlalo waleli qembu uMnuz Leonard Ngcobo uthe amakhosi abehlaliswe noquqaba futhi abezindaba bemi phambi kwawo kanti abathwebuli bebephakamisela amacamera phezu kwamakhanda amakhosi.
Uthe: “Umphathi wohlelo onguSomlomo womkhandlu waseMzumbe uMatho Shozi akazange nje azikhathaze ngokusho ukuthi kukhona amakhosi,” kusho uMnuz Ngcobo.
UMapholoba uthi ngisho ukuthi kunikezwe inkosi yesizwe ithuba lokuba yamukele izihambeli akuzange kwenzeke futhi uthe lokho ukubona kuwukudelela inkosi yesizwe uBathebuya Cele.
Uthe: “Kuyacaca ukuthi lokhu bekuhleliwe ukukhombisa amandla abanawo phezu kwaMakhosi.
“Sinxusa uNgqongqoshe uNkk Weziwe Thusi neziMeya ukuba basichazele ukuthi bekuhlosweni ngalelichilo elenzekile.
“Iqembu le-DA lizoqhubeka nokulwela sithunzi nokuhlonishwa kobukhosi njengokuyalela koMthetho sisekelo wezwe lase Ningizimu Afrika.”